Turbinin'ny rivotra tsy misy blaogy vaovao manova ny fanavaozana | Fanavaozana maintso
Portillo Alemanina | | Herin'ny rivotra
Tamin'ny lahatsoratra teo aloha dia niresaka momba ny olan'ny fako ateraky ny lelan'ny turbin-drivotra ny fiompiana rivotra. Tsy ho ela dia tsaboina izy ireo lelafo mihoatra ny 4.500 ary araraoty ireo fitaovana ireo.
Mba hisorohana ny fiantraikan'ny lelany amin'ny vorona, ny fiatraikany amin'ny maso, ny fitsitsiana ara-materialy ary ialana amin'ny famoahana fako, tetikasan'ny turbinina rivotra tsy misy lelany. Ahoana no ahafahan'ny turbinina rivotra mamorona herin'ny rivotra tsy misy lelany?
1 Tetikasa Vortex Bladeless
2 Toetra mampiavaka ny turbin-drivotra
3 Tombontsoa azo avy amin'ny turbin-drivotra
Tetikasa Vortex Bladeless
Ity tetik'asa ity dia manandrana mivoatra ny turbine rivotra 3-pira ankehitriny ka lasa turbines tsy misy lelany. Raha misy fisalasalana momba an'io, ireo turbine rivotra ireo dia afaka mamokatra angovo mitovy amin'ny an'ny mahazatra, nefa miaraka amin'ny tahiry amin'ny vidin'ny famokarana ary misoroka ny fiantraikan'ny lelany.
Satria tsy manana lelany izy dia tsy mitovy amin'ny an'ny ankehitriny ny fomba famokarana angovo ary koa ny endriny sy ny endriny. Ireo tompon'andraikitra amin'ny tetikasa Vortex dia David Suriol, David Yáñez ary Raúl Martín, mpiara-miasa amin'ny orinasa Deutecno.
Ity fihenan'ny blades ity dia manome tombony amin'ny fanangonana fitaovana, fitaterana, fanamboarana, vidin'ny fikolokoloana ary koa miteraka angovo 40% bebe kokoa amin'ny vola mitovy aminy izay ampanjifaina amin'ny mahazatra.
Nanomboka ny taona 2006, rehefa napetraka ny patanty voalohany ho an'ity famolavolana ity dia nisy ny asa natao hanatsarana ireo turbine rivotra ireo. Mba hitsapana ny fahombiazana sy ny fahombiazan'ny famokarana herinaratra, namboarina ny tionelina iray mba hitsapana sy hanazavana ny zava-misy. Voaporofo izany turbinina prototype iray tokony ho 3 metatra ny haavony.
Toetra mampiavaka ny turbin-drivotra
Ity fitaovana ity dia misy varingarina mitsivalana somary henjana, izay miorim-paka amin'ny tany ary an'iza fitaovana dia piezoelectric. Tsaroanay fa ny fitaovana piezoelectric dia afaka manova ny adin-tsaina mekanika ho herinaratra, ary ny herinaratra ho hovitrovitra mekanika. Ny quartz dia ohatra iray amin'ny kristaly piezoelectric voajanahary. Avy eo, ny angovo elektrika dia vokarin'ny fiovan'ny toetr'andro ireo fitaovana ireo rehefa miditra amin'ny resonance amin'ny rivotra izy ireo. Amin'ny fomba azo takarina dia miasa izy io toy ny batika baseball mivadika, mivadika ary mihetsiketsika.
Ny ezaky ny turbinin'ny rivotra dia ny manararaotra Vokatry ny vortex an'i Von Kármán. Ny arabe von Kármán vortex dia lamina miverimberina vortices eddy vokatry ny fisarahana tsy mitongilana ny sosona tsiranoka rehefa mandalo ireo vatana nalentika. Amin'ity vokatra ity dia afaka mihodina avy amin'ny lafiny iray mankany amin'ny ilany ny turbin-drivotra mba hahafahany manararaotra ny angovo kinetika noforonina ary hamadika izany ho angovo elektrika.
Tombontsoa azo avy amin'ny turbin-drivotra
Ny sasany amin'ireo tombontsoa azo avy amin'ireto turbine vaovao ireto dia:
Tsy mitabataba izy ireo.
Tsy manelingelina radara izy ireo.
Vidiny ambany kokoa amin'ny fitaovana sy fivoriambe.
Ny vidin'ny fikolokoloana ambany.
Mampihena ny fiatraikan'ny tontolo iainana sy ny fiantraikan'ny tontolo iainana.
Mahomby kokoa. Mamokatra angovo madio mora vidy kokoa.
Izy io dia miasa miaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny rivotra.
Kely ny toerana misy azy ireo.
Ny vorona dia azo antoka amin'ny fisidinana manodidina anao.
Ny dian-tongan'ny karbaona dia ahena 40%.
Izy ireo dia mety amin'ny zavamaniry any ivelany noho ny fahatsoran'izy ireo amin'ny fametrahana sy fikojakojana.
Miaraka amin'ity revolisiona angovo rivotra ity dia hampitombo ny tsenan'ny rivotra ireo turbine izay mitahiry vola ary mitazona ny famokarana herinaratra mitovy. Ny fametrahana andrana feno dia ho vita amin'ny faran'ity taona ity, izay hatambatra amin'ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro hamoahana herinaratra any India.
Ho fanampin'izay, ny tetik'asa dia nahazo ny fanohanan'ny Repsol sy ireo mpampiasa vola tsy miankina roa ambin'ny folo hafa izay nisafidy ny hampivelatra ny angovo rivotra sy ity famoronana revolisionera ity. Ny vidin'ny tsena dia 5500 12,5 euro eo ho eo amin'ny turbine misy rivotra XNUMX m. Fa ny tanjona dia ny hanangana Vortex 100 metatra amin'ny taona 2018, satria arakaraky ny maha avo ny turbin-drivotra azy no hahitana ny fahombiazany bebe kokoa sy ny angovo vokariny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Herin'ny rivotra » Ny turbine rivotra tsy misy blaogy